UYILA NJANI IRING YAKHO YOKUZIBANDAKANYA KWAYE KUTHENI KUFUNEKA - UTHETHATHETHWANO
Eyona Uthethathethwano Ndiyilele eyam i-Engagement Ring kwaye nawe kufanelekile
Ngaba ukuyila iringi yakho yokuzibandakanya kuyonakalisa isimangalo sesindululo? Ngokomtshakazi omnye, akunjalo. ULauren Levy
U-Lauren wayengumfundi wasemsebenzini kunye noMncedisi woHlelo loMtshato.
Ukuhlaziywa ngoFebruwari 14, 2020
Akuyomfihlo ukuba ndicinga ngakumbi ngendandatho yam yokutshata kunendoda endiza kutshata nayo ngoku. Ewe, luphawu lothando lwethu kodwa yinto endiyibonileyo kwaye ndacinga ngayo esandleni sam kwakude kudala ngaphambi kokuba ndidibane naye.
Ndibize ngokungacacanga okanye ngokungakhathali ukuba uyafuna kodwa njengentombazana ekhulayo, bendisoloko ndiqaphela ukuba ibling umfazi wayegungqa xa ndidibana naye-luhlobo luni lwesitayile, ukuseta, amatye, kwaye ndicinga uhlobo lweringi endiya kuyifuna ngenye imini nxiba. Kwaye inxenye yephupha lam yayingeyiyo yokuba uPrince Charming wayeza kundothusa ngedwala endinokulithanda okanye ndingalithandi, yayikukuba ndiza kuba nelizwi ngesi sigqibo sikhulu ngokweemvakalelo nangezemali-kwaye mhlawumbi ndide ndiyile eyam umsesane wokubandakanya.
Uyawucutha uMdlalo wokuQikelela
Xa mna nesithandwa sam sasirhangqa incoko malunga nokubandakanya amakhonkco ngenye imini, kwavela ukuba siphelele kwiphepha elinye. Wayeyazi ukuba ndandifundiswe ngendlela engaphezulu kwesihloko kunaye kwaye wayeziva ukuba kulungile ukuba ndibandakanyeke. Kwaye ayisiyiyo le nto yokuba ndazi konke malunga Ii-4Cs ukusuka ekusebenzeni kwishishini lomtshato. Kuye, ndim oya kuthi ngethemba lokuba ndiza kunxiba la makhonkco yonke imihla yobomi bam, kutheni ndingafanele ndiyifumane kanye le ndiyifunayo?
Kumfana wam, kwavakala ngathi kusisiyatha kwaye kubuyela umva ngamadoda angazi kangako njengamaqabane abo kulo mbandela ukukhetha into eyimfama, ekhokelwa kuphela ziimpawu 'ezifihlakeleyo' okanye iingcebiso. Ingakumbi into eza kubakho emzimbeni womfazi ubomi bayo bonke ukuba ukhetha, nokuba iqabane lakhe likhetha into angayithandiyo. Ngoku ka Ubucwebe beKnot 2019 kunye noPhononongo lokuzibandakanya , I-avareji yemali echithwe kwindandatho yokuzibandakanya yi-5,900 yeedola kwaye umyeni wam oza kuba ngumyeni wam unomdla wokuchitha olo hlobo lwemali kwinto ethile engafanga ngokuqinisekileyo yile nto kanye ndifuna ukuyifumana kwiinkcukacha zokugqibela . Yayinengqondo kuye kuphela into yokuba asike umdlalo wokuqikelela, ukuphoxeka okuyimfihlo, kwaye 'ukwenze okokuqala okokuqala' - kunye.
Uya kwenza izigqibo ezibalulekileyo kunye
Kwaye yile nto siyenzileyo, nangona abanye bexhala lokuyila iringi yabo yokuzibandakanya iya kususa kwezothando okanye ukumangaliswa kwesindululo. Kodwa oko kwakungekho njalo kwaye isithandwa sam sandixhasa ngenkqubo yokwenza izigqibo njengoko ndandikhokela. Into yokuqala endidinga ukugqiba ngayo kukuba ndifuna ukusebenzisa ilitye elisikiweyo le-emerald endishiyelwe ngumakhulu okanye ndithenge idayimane entsha kwaye ndigcinele umakhulu wam isacholo somqala idayimani embindini kwaye ndiphuphe ngenye imini ndinenguqulo efanayo).
izipho zokumkhumbuza ngemithi
Kodwa ngenxa yexabiso lemvakalelo ledayimani lika gogo kunye nenyaniso yokuba sizama ukubhatala ilitye elitsha, umtshato, kunye nendlu, ngokupheleleyo kuthi kwaye macala onke, impendulo ibonakala icacile. Kodwa kwakhona, esi yayisisigqibo esasifunwa sisithandwa sam ukuba ndisenze ndedwa emva kwexesha ndicinga ngaso endaweni yokuba asenzele sona.
Kungekudala emva koko, umama weza kusityelela eNew York kwaye mna naye sasinosuku 'lokujonga nje' kunye. Isithandwa sam saziva siqinile ukuba xa kufika ixesha lokuba sikhethe izinto kwaye siqale ukwenza izigqibo, bekufanele ukuba sisobabini kuphela kodwa andikhange ndicinge ukuyothenga iiringi zokuzibandakanya ngaphandle komama. Ke oko yayikukulalanisa kwethu - usuku oluphuma kunye nomama ukuze sifumane izimvo, kodwa ke xa siye sayokuthenga iringi, yayiya kuba yiyo ke ngoko ukuze angazikhathazi ngaye okanye nangomnye umntu ojika isigqibo sam. Kwakhona, wayefuna ukuba ndifumane le ndiyifunayo hayi le wayecinga ukuba ndiyayifuna okanye endicinga ukuba omnye umntu ucinga ukuba ndiyayifuna. Kunokubakho uxinzelelo oluninzi ngesigqibo esinjengale!
Ngelixa ndiphume ndadibana neezacholo kunye nomama, ndabona i-emerald esikiweyo iringi kwindawo ebonakala ingaqhelekanga kwaye ndathatha umphefumlo wam. Bendihlala ndiyazi kakuhle into ebendingayifuni, kodwa ngokunyanisekileyo bendingenalo nofifi lokuba iringi yam 'egqibeleleyo' ibikuhlahlo-lwabiwo mali olululo. Kwaye kufuneka nditsho, lo ebephantse wayifumana. Ewe bezikhona izinto endifuna ukuzitshintsha, kodwa oku kundinike umbono wokuba ndixhume.
Uyila umsesane onentsingiselo eyongezelelweyo
Emva koko, umntu endiza kutshata naye sadibana nesacholo esasicofa sobabini nobani esizakusebenza nathi ekuyileni umsesane wam wokuzibandakanya. Kuqala, wahlola ilitye likamakhulu kwaye wafundisa isoka lam ngalo. Emva koko ndibabonisile uhlobo loyilo endiluthandileyo saza necebo elinentsingiselo emangalisayo kwaye labethelelwa kanye le nto bendiyifuna: ukongeza kwilitye likamakhulu, siza kukhetha i-emeralds encinci ukuyibeka ecaleni 'entsha ukusuka kwisithandwa sam 'kwaye emva koko ndiyigqibe, iidayimani zebaguette kwicala ngalinye ukusuka kuseto lwendibano yokuqala kamama.
Oko kuyakwenza isangqa esidibanisa umakhulu wam, umyeni wam wexesha elizayo, kunye nomama kwilungu elinye lobucwebe. Emva kokuba silwenzile umzobo kunye nogxa wakhe, ijeeler yathi izoku-odola iintlobo ngeentlobo zeesemerald ngobukhulu obahlukileyo obuhambelana nomgangatho welitye lam eliphambili ukuze sikhethe esona sibini sasithanda kakhulu.
Kwimpelaveki elandelayo sangena sagqiba ngamatye amabini asecaleni sobabini. Sishiye i-jeweler kunye nelitye lika-makhulu kunye ne-baguettes yomama, kwaye oko kukugqibela endikubonayo kwindoda endala enobubele. Yena nesoka lam bayithatha apho.
iskripthi somtshato esingahambisani nenkolo
Bendingazi ukuba iringi ilungile nini okanye iya kuba yintoni imveliso yokugqibela. Ewe ndingacinga uyilo kodwa kuba lwaluhluke ngokupheleleyo kwaye ngokungafaniyo nantoni na endakha ndayibona ngaphambili, bendisemnyameni. Kwaye ukongeza kule mfihlakalo, umfana endithandana naye onobuqhophololo wayeneposi encinci 'ethunyelweyo' ayithumele kumama 'ukuyigcina ikhuselekile.' Ngale ndlela wayeza kucinga ukuba unayo iringi, kwaye kuba ulixoki elibi, ndingacinga ukuba unayo iringi, esongeza kukothuka kwethu sobabini xa wayecebisa. Umzuzu wawungumlingo (ugqibile ngokudubula umnyama kumpompo wamanzi), iringi ikoluvo lwam iyothusa, kwaye ukubandakanyeka kuyo akuzange kususe kuyo okanye kwenze ukuba ibali lethu lokuzibandakanya lingabinantsingiselo kuba 'bendisazi' ngeringi . Yenze ngcono nangakumbi kuba akukho nanye into endifuna ukuyitshintsha.
Nazi iindlela ezininzi ezitshatileyo ezenze ukuKhangela kokuQala ngo-2017
Umtshakazi Uyoyiswa ngeemvakalelo xa esiva iLizwi likaTatomkhulu wakhe oMva emva koMtshato wakhe
UCHRIS HARRISON, UHANNAH UMNTU, JED
UJennifer Lawrence soze aphinde abe nguMtshakazi: Fumanisa ukuba kutheni
Iintliziyo eMlilweni kunye noMyili woMtshato uHayley Paige uya kukhupha ingqokelela yomsesane womtshato
INkosana uGeorge kunye neNkosazana uCharlotte bayayiphinda imisebenzi yabo njengeNkwenkwe yePhepha kunye noMtshakazi oMncinci ku-Princess Eugenie
Ungatshata njani ngokusemthethweni eIdaho kwaye ucwangcise umtshato wakho we-ID
Ukutyhilwa kwabantwana ngokwesini kwiLizwe leDisney kuguqulwe kwaba sisicelo: Jonga uMzuzu ovuyisayo
INkosana uHarry iqinisekisa ukuba iyathandana noMeghan Markle, Ivakalisa inkxalabo yoKhuseleko lwayo: Funda ingxelo yakhe
URose Leslie kunye noKit Harington baQinisekisa ukuzibandakanya kwabo kwiSibhengezo samaphephandaba
I-Catfish's Nev Schulman Ibandakanyeke kuLaura Perlongo: Jonga iiFoto zeRingi yokuzibandakanya
Amasiko 9 Omtshato waseKorea Uza Kuwabona Kwimibhiyozo Yesiko
ukuphinda uphinde usebenzise igumbi lokuhlala
Igama lokhuseleko loluntu litshintsha utah
njani ukumema umtshato
UVenus Williams unovuyo kakhulu kuDade Serena Williams Emva kokuzibandakanya
Iimbono eziPhezulu zeBachelorette Party kunye neeTrends zika-2021, ngokweDatha yethu
UAbby Elliott utshata uBilly Kennedy kumsitho womtshato wase-New England